Abantu abaningi ukwesaba abantu zihlotshaniswa nezwe izinambuzane, futhi sekukaningi ukuba alandise arachnophobia, ngenxa yokwesaba izinto uhlale endaweni ethile eseduze. Izicabucabu, lezi ezilwaneni ezidla ezinye izilwane ezincane kodwa nanti uhlala eduze nathi, e yethu izindlu, izindlu zangasese kanye zewayini, okuyinto abhekwa zonke izinhlobo spider okuzingela, zazo zikhona izinkulungwane 38. Spider black umfelokazi - hhayi zokugcina zombuso besicabucabu.
Igama langempela kwalesi silwane - karakurt futhi engathandeki ngakho "Isidlaliso" wathola kuphela insikazi isicabucabu. Kungani amalungu "buthakathaka" kwalesi silwane ithole igama Black Widow? lokhu spider uba nedumela elibi ngokuba izintokazi "abamnyama" karakurt uhlobo othanda isidlo sasemini suitors yabo. Ngokushesha ngemva copulation insikazi Black Widow zihlanganisa abayeni ezineshwa kwasemini imenyu. Bezama ukusinda ngemuva "uthando" enjalo, abafelokazi black besilisa kuletha izipho ezidliwayo kodwa ngisho nalezi zinyathelo musa njalo abasindise. Ngokuvamile, cishe ingxenye yabantu besilisa Black Widow ngukudla omkawo.
Karakurt nabesifazane zihluke kwabesilisa hhayi kuphela imikhuba emibi, kodwa futhi ukubonakala. Ziyakwazi inkulu kakhulu kunangendlela zabo "amadoda." Black umfelokazi spider Jens esitezi has polutorasantimetrovy ubukhulu pyatisantimetrovym obuphelele, ecwebezelayo emnyama-bomvu coloration kanye nemihlathi ezinobuthi. Funda karakurt kungenzeka ku endaweni elibomvu phakathi ngemuva abamnyama. izimo eziyingozi insikazi ukhetha ukulinda, babuthana ku umgodi noma slot. Karakurt eyohlasela kuphela uma wethukile kakhulu noma ngithukuthele. Abesilisa kwalesi silwane mancane kakhulu kunalawo "womshado 'yabo. I ububanzi we umzimba ilingana amamilimitha angu amane nesikhombisa, futhi ezinyaweni kuyinto ngamasentimitha esingaphansi kwezinsuku ezimbili. Ubuthi owesilisa Ompofu futhi ngofuzo. Njengoba akanalutho ukuvikela, abamnyama umfelokazi spider kwabesilisa nje udonsa emilenzeni eziyisishiyagalombili namanga izimele. Lapho ingozi sihamba, iphele masinyane kwezinye cunt.
Karakurt ehlala iCaspian emaqeleni kanye ezifundazweni eziseningizimu ye-Russia nase-Ukraine. Ifomu yalezi izicabucabu has ezintathu zinhlobo: brown (noma mpunga), obomvu kanye enyakatho. Njengomthetho, karakurt axazulule Burrows noma izikhala emincane. Njengazo zonke Izicabucabu, lolu hlobo beluka yolwembu ngezikhathi futhi kakhulu welulela. Ezindaweni lapho bukhoma karakurt spider black umfelokazi akuyona idumela elihle. Isihlungu "izintokazi" iqukethe neurotoxin okuyinto ukuphuza amaphilisi amaningi angase avuse ukukhubazeka kanye ukubulala indoda. Inani elanele inyongo ibe n AUC, ngenhlanhla, uye Nokho ezingemnandi izonikeza bite. Umuntu yenhlwathi umfelokazi abamnyama, qala ukulimaza ngokuhlanganyela, vomits, enza umzimba izithukuthuku ebandayo , futhi kukhona ubuhlungu enhliziyweni. Ukulunywa siluhlaza evuvukele. Uma ukunakekelwa singanikezwanga, ke yokutakula kuyofika ngemva kokuba 3-4 izinsuku. Waba yini umphumela lapho iphuzwa ngokweqile kungenzeka kuphela uma isenzo sigcizelelwa spider Isihlungu yokungezwani komzimba.
Noma kunjalo, konke kubi kangaka cha. Ukushona kwabavukuzi abangu- bite karakurt ivelakancane. Black umfelokazi spider, isithombe ongawabona kulesi sihloko, kutholakala Awukude yonke indawo. Funda kuzo kalula phezu umbala, kuzuze zesifazane ezinobuthi - izinambuzane kunalokho enkulu, futhi awuboni le spider akunakwenzeka.